လင်္ကာ: ရင်ထဲက ရှစ်ဆယ့်ရှစ်
အပိုင်း ( ၄ )
ကျနော်အဲဒီ့တညလုံးကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ရဘူး..အားလုံးကလည်းအကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ် ကုန်ကြပြီ၊ ဘယ်ရောက် လို့ဘယ်ပေါက်ကုန်မှန်းမသိ၊သပိတ်စခမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူဦးရေကြည့်လိုက်တော့အယောက် ၂၀တောင်ကောင်းကောင်းမပြည့်ချင်ဘူး၊တော်တော်လေးထိတ်လန့်ပြီးစိုးရိမ်နေမိတာအမှန်ပဲ…ဘယ်အချိန် များ ငါတို့ကိုဝိုင်းပြီးဖမ်းမလည်းပေါ့..ဒါပေမဲ့ ပတ်ချာလည်မှာဝိုင်းပတ်နေတဲ့အိမ်တွေကလူတွေနဲ့ သပိတ် စခမ်းရှိရာ ဆုံတိုက်ရပ်ကွက်ကပြည်သူတွေကအမာခံကာကွယ်ပေးထားတယ်..ဒုတ်တွေ၊ဓါးတွေဂျင်ကလိ လက်နှက်တွေ ကိုင်ဆောင်ပြီးညလုံးပေါက်ကင်းစောင့်ပေးရှာတယ်။ကြားဖြတ်ပြီးတခုပြောချင်သေး တယ်.. ဂျင်ကလိဆိုတာ မြှားပုံစံလုပ်ထားတဲ့သံချောင်းအတိုလေး…လောက်လေးဂွနဲ့ထဲ့ပစ်တာ…အဲဒါမှန်လိုက်လို့ ကတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးဗျ…အာဏာပိုင်တွေဟာ..အဲဒီ့ဂျင်ကလိလက်နှက်ကိုတော်တော်ကြောက်ကြ တယ်…တော်တော်လှမ်းတဲ့အကွာဝေးထိလှမ်းပစ်လို့ရတယ်….
မနက်လင်းလင်းချင်းရောက်လာတာကကျနော့်အမေ..အူးယားဖားရားနဲ့ရောက်လာတယ်..ကျနော့်ကိုမြင် လိုက်မှတော်တော် စိတ်ချမ်းသာသွားပုံရတယ်..သူလည်းတညလုံးမအိပ်ရေသေးဘူး…
“အိမ်ကိုညကရဲတွေအထပ်ထပ်ဝိုင်းပြီး…မင်းကိုလာရှာတယ်…တအိမ်လုံးလိုက်ရှာကြတာဗြောင်း ဆန်နေတာ ပဲ..ရဲအရာရှိတယောက်ကငါ့နားထင်ကိုသေနပ်နဲ့ထောက်ပြီး..ခင်ဗျားသားဘယ်မှာလည်းမှန်မှန်ပြောဆိုပြီး..မေးတယ်..ငါကလည်းအမှန်ပြောတာလေ..ကျမဘာမှမသိဘူး..သူလုပ်တာတွေက..သူစိတ်သူ့သဘောနဲ့  လုပ် တာ..ကျမလည်းဘာမှမပြောဘူး…ဆိုတော့..တော်တော်ရိုင်းကြတယ်ကွာ…ပြောတာဆိုတာတွေက… လူမဆန်ဘူး…တခါမင်းညီတွေရောကျန်တဲ့အလုပ်သမားတွေရောကိုဝမ်းလျှားမှောက်ခိုင်းပြီးထားတယ်… ငါမင်းအတွက်တော် တော်စိုးရိမ်တာ…ဆုတောင်းလိုက်ရတာအမောပဲ…မင်းကိုတွေ့မသွားတော့..သူတို့တော်တော်လေးဒေါကန်နေပုံရတယ်…တော်တော်များများလည်းအဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားတယ်..လူ အယောက်၃၀လောက်မြို့မရဲစခမ်းအချုပ်ထဲမှာအခုဖမ်းထားတယ်တဲ့…”အမေနဲ့အိမ်သားတွေအတွက်တော် တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်..မနက် ၇နာရီလောက်ရောက်တော့လူတွေတဖွဲဖွဲသပိတ်စခမ်းရှိ ရာကိုရောက် လာကြတယ်…ဒါပေမဲ့..ကျနော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေက စုစည်းလို့မရသေးဘူး…ယာယီ ဥက္ကဌ တင်ထားတဲ့..စက်မှု့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုကံတင်ကလည်းအဖမ်းခံလိုက်ပြီ…ဖြစ်ချင်တော့… လှုပ်ရှားမှုအဖြိုခွဲခံရပြီးနောက်ကိုယ့်အိမ်တွေကိုယ်ပြန်အိပ်ကြတဲ့သူတွေအကုန်နီးပါးလောက်အဖမ်း ခံလိုက်ရ တယ်..
ကျောင်းသားရယ်လို့ပြန်စုစည်းလို့ရတာ ကျနော်ရယ် ၊ မြင့်ငွေ ၊ ကိုဝင်းရွှေ ၊ ကိုပေါက် ဂျီတီအိုင်)လောက်ပဲရှိတော့တယ်..ကျန်တဲ့သူတွေပြန်ဆုံလို့မရသေးဘူး…လူအယောက်၁၀၀လောက်သပိတ် စခန်းထဲမှာစုစည်းမိတယ်ဆိုရင်ပဲ..မြင့်ငွေကလူထုတရားပွဲကိုစကျင်းပတယ်…မနေ့ညနေကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ် စဉ်မှာသူကကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူဆိုတော့..အပ်ကျမတ်ကျပြောပြနိုင်တယ်လေ…လူထုရင်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ် သွား သလဲဆိုတော့..အစိုးရရဲ့ဗြောင်ကျကျလိမ်ညာမှု့ကြီးကိုအတော်ကိုစက်ဆုတ်သွားကြ တယ်… တဖြေးဖြေးနဲ့လူတွေကသပိတ်စခမ်းထဲကရောက်လာလိုက်ကြတာ..လည်ပေါ်သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ထဲမှာ အပြည့်လောက် ရှိနေပြီ…မကြာခင်ပဲ..ကျနော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ထဲက..ကျော်စွာမြင့်ရောက်လာ တယ်..အားလုံးကတော်တော်ဝမ်းသာသွားကြပြီ…သူနဲ့အတူမန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား. .အောင်မျိုး (ယခုကင်ဆာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး..စင်္ကာပူ)ပါပါလာတယ်လေ…အားတွေကိုပြန်စုနိုင်ကြပြီ…ဒီလိုနဲ့မနက် ၉နာရီလောက်ရောက်တော့ မြို့လည်ထဲကပစ်ခပ်နေတဲ့သေနတ်သံတွေကိုအတိုင်း သားကြားနေ ရတယ်..သတင်းလာပို့သူတွေကလည်း.. အပြေးအလွှားသတင်းလာပို့ကြ….
“မြို့ထဲမှာ…လူစုစုရှိတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ဖြိုခွဲနေတယ်..ရဲတွေအများကြီးပဲ…လဘက်ရည်ဆိုင်ထဲက စားပွဲထိုးလေးတယောက်ကပုဆိုးလှန်ပြလို့ဆိုသေနပ်နဲ့ပစ်လိုက်တာ..ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်…သူ့နံမည်က.. ရာကူ..တဲ့…နောက်ဆိုက်ကားစီးလာတဲ့..တယောက်သေနပ်ကျည်ဆိုင်ပါးစပ်မှန်သွားတာ ..ဆေးရုံကို ချက်ခြင်း ခေါ်သွားတယ်..သူ့နံမည်ကဦးသောင်း…နောက်ထပ်လည်းသေတဲ့သူတွေမှန်တဲ့သူတွေရှိသေး တယ်ကြား တာပဲ….အဲဒီနေ့ကကျနော်တို့သပိတ်စခန်းကနေပြင်ပထွက်စီတန်းဆန္ဒပြမှု့မလုပ်ဘို့ဆုံးဖြတ်ချက် ချ လိုက်ကြတယ်.. သပိတ်စခန်းကိုပဲ..ကျ မသွားအောင်အကာကွယ်ပေးဘို့..ပြည်သူလူထုကိုမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ တယ်…ကျောင်းသား သမဂ္ဂကိုလည်း..ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြတယ်…ကျနော်က ဥက္ကဌ ၊ ဒု ဥက္ကဌ က ကျော်ဆန်းဦး ၊ အောင်မျိုးက အတွင်းရေးမှုး၊တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုးကျော်စွာမြင့်နဲ့မြင့်ငွေကအခြေခံ ပညာအထက်တန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တာဝန်တွေကိုယူခဲ့ကြတယ်…
ညရောက်တော့လူထုကကျနော်တို့ကိုမေတ္တာရပ်ခံတယ်..ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကျလို့မဖြစ်ဘူးဒါ့ကြောင့်ကျနော်တို့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားမယ်..သပိတ်စခန်းကိုသူတို့ကာကွယ်မယ်..သတင်းတွေက လည်းရထားတာရှိတယ်…သပိတ်စခမ်းကိုရဲအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်စီးလိမ့်မယ်..ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့..မနက်ဖြန်ကရှစ်လေးလုံးနေ့..တနိုင်ငံလုံးတပ်လှန့်ထားတဲ့နေ့…သတင်းရထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ..သက်ဆိုင်ရာအာ ဏာပိုင်များကအဲဒီ့ညမှာ..အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်စီးဘို့ကြိုးစားတယ်…ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မားမားမတ်မတ်ခုခံမူ့ ကြောင့်..သူတို့သပိတ်စခန်းကိုဝင်မစီးနိုင်ခဲ့ဘူး..တပ်လှန်သွားခဲ့ တယ်။ညပိုင်းရောက်တော့..သပိတ်စခန်းတည်ရှိရာဆုံတိုက်ရပ်ကွက်ကအမာခံလူထုတွေက..ကျနော်တို့ကိုလျှို့ဝှက်ခေါ်ထုတ်သွားပြီး..လုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ပေး ထားတယ်..မှတ်မိနေပါ သေးတယ်..ကျနော်ရယ် အ တွင်းရေးမူး အောင်မျိုးရယ် တွဲ-အတွင်းရေးမူး ကျော်စွာရယ်လိူင်ဂူကြီးတစ်လုံးထဲဝင်အိပ် ရတယ်..ကောင်းကောင်းလည်းအိပ်မရပါဘူး…အပေါ်ကသဲတွေကတဖျောဖျောကျ ဆိုတော့..ပေး ထားတဲ့..စောင်တွေကိုခေါင်းမြီးခြုံပြီးကွေးနေရတာပေါ့..အားလုံးကမနက်ဖြန်အတွက်ရင်ခုန်နေကြတော့. .တော်တော် နဲ့အိပ်မပျော်နိုင်ကြပါဘူး
မနက်မိုးလင်းတော့ကျနော်တို့သပိတ်စခမ်းရှိရာကိုသွားခဲ့တယ်…လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေက..ညကသပိတ်စခမ်းကိုဝင်စီးဘို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့…ရဲတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ကာကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြန်ပြောပြကြတယ်…ရဲတွေဂျင်ကလိနဲ့လောက်လေးတွေမှန်ပြီးရှေ့ဆက်မတက်ရဲပဲ..ပြန်ဆုတ်သွားကြ တယ်…မနက်၈နာရီလောက်ရောက်တော့..လူတွေတော်တော်များများရောက်လာကြပြီ…ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေကိုယ်စီကိုယ်စီလွှင့်ထူလို့…ကျနော်တို့က၁၀နာရီမှာချီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဘို့သတ်မှတ်ထားတော့…၁၀နာရီလောက်မှာ..လူထုကြီးကသပိတ်စခမ်းထဲမှာခြေချစရာနေရာမရှိလောက်အောင် ကိုများနေပြီ…..အဲဒီနေ့မှာကျနော်တို့ထဲကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအကုန်နီးပါးလောက်ပြန်ဆုံနိုင်ကြတယ်… ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမင်းရဲထွန်းကား၊တို့ပြန်လာတယ်…ဒီလိုနဲ့သပိတ်လမ်းကြောင်းချီတက်ရာလမ်းကြောင်းေ ရး ဆွဲနေ စဉ်မှာပဲ…အမကြီးတယောက်က အမောတကောပြေးလာပြီး ကျနော်တို့ကို လာပြောတယ်…
“မောင်လေးတို့..အမအရေးကြီးတာလေးတခုပြောချင်တယ်..မောင်လေးတို့ယုံတာမယုံတာခန ထားပေါ့..အမပြောတာလေးတော့နားထောင်ပေးပါ…အမကိုအကြံပေးတဲ့သူရှိနေလို့ပါ…မောင်လေးတို့ချီ တက်ရင်တောင်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးမသွားကြပါနဲ့…နဂါးဦးခေါင်းကဒီလမှာမြောက်ဘက်ကိုဦးတည်နေ တယ် …တောင်ဘက်ကို ဦးတည်သွားတယ်ဆိုရင်..နဂါးခံတွင်းထဲဝင်သွားသလိုဖြစ်မယ်..အစားခံရလိမ့်မယ်…အမတောင်းပန်ပါတယ်…မသွားကြပါနဲ့…မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ပါ….”သူကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ပြုံးမိကြ တယ်…ဒါနဲ့ပဲ..ကျနော်တို့အားလုံးက..တောင်ဖက်ကိုဦး တည်ထွက် မဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပြီးမြောက်ဘက် ကိုဦးတည်ထွက်လိုက်ကြတယ်….ပြီးတော့. .ပစ်ခတ်နိုင်လောက် တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောင်ပြီးချီတက်ခဲ့ကြတယ်….အဲဒီနေ့ကပစ်တာခတ်တာလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူး…ပါဝင်လာတဲ့လူထုအင်အားကြီးကလည်းကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင်များလိုက်တာမှမပြောပါနဲ့တော့…..တမြို့လုံးမှာရှိနေတဲ့လူထုကလည်းအားပေးလိုက်ကြတာ..ကျနော်တို့တယောက်ကို တယောက်ကြည့်ရင်းကျေနပ်မိခဲ့ကြတယ်…ဘာပဲပြောပြောကျနော်တို့ကြိုးပမ်း ချက်တွေအောင်မြင် သွားပြီ… .ပူပြင်းလှတဲ့အညာနေရဲ့ဒဏ်ကိုတောင်ဘယ်သူမှမမူ့ကြဘူး….မြို့လည်မှာကျနော်နိုင်ငံရေးတရားဟောတော့ …အောက်ကလူထုကိုကြည့်ပြီး…ကြက်သီးတွေတောင်ထမိတယ်…အားလုံးရဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်တွေဟာ. .နာကျဉ်း ခက် ထန်နေကြသလိုပဲ…ကြွေးကြော်သံတွေကိုနောက်ကလိုက်အော်သံတွေ ဟာ….မိုးကြိုးအလုံး လိုက် အလုံးလိုက်ပစ်ချလိုက်သည့်အလား